Amaokwu Baịbụl dị n’isiokwu a: Infertilidade -> Ndụ
O Senhor visitou Ana, e ela concebeu, dando à luz três filhos e duas filhas. Entretanto, o menino Samuel crescia na presença do Senhor.
 I chetara Elizabet onye ikwu gị? Agadi ahụ? Ndị mmadụ sị na ọ gaghị amụlitekwa nwa, ma gịnị mere ugbu a? Ọ dị ime ọnwa isii ugbu a o merela agadi. O si otu a mee nꞌihi na ọ dịghi ihe nyịrị Chineke ime.”
 Ma mmụọ ozi ahụ gwara ya okwu sị, “Zakaraya, atụla egwu! Nꞌihi na abịara m ịgwa gị na Chineke anụla ekpere gị. Ọ ga-emekwa ka Elizabet nwụnye gị tụrụ ime, mụtara gị nwa nwoke, onye ị ga-akpọ aha ya Jọn. Ọmụmụ nwanta a ga-ewetara unu oke ọṅụ na obi ụtọ. Ọtụtụ mmadụ ga-esorokwa unu ṅụrịa ọṅụ. Nꞌihi na nwanta ahụ ga-abụ onye dị ukwuu nꞌanya Chineke. Ọ gaghị emetụ mmanya ọ bụla aka, ọ gaghị aṅụkwa mmanya na-egbu egbu, nꞌihi na site nꞌafọ nne ya, Chineke ga-emejupụta ya na Mmụọ Nsọ. Ọrụ ya ga-abụ ịkpọghachite ọtụtụ ụmụ Izirel nꞌebe Onyenwe ha na Chineke ha nọ. Dị ka Ịlaija siri bụrụ nwoke dị ike, na onye jupụtara na Mmụọ Nsọ, otu a ka Jọn ga-adị. Ọ bụ ya ga-aga nꞌihu Onye nzọpụta ahụ na-abịa, kwadoo ndị mmadụ ịnabata Onyenwe anyị. Jọn ga-emekwa ka udo dịrị nꞌetiti ndị nna na ụmụ ha, ọ ga-akpọghachitekwa ndị na-enupụ isi mee ka ha bụrụ ndị ga-eche uche dị ka ndị ezi omume.” Zakaraya jụrụ mmụọ ozi ahụ ajụjụ sị ya, “Olee otu m ga-esi mata na ihe ị gwara m bụ eziokwu? Ị hụlanụ na abụrụla m agadi nwụnye m bụkwa agadi.” Mgbe ahụ mmụọ ozi ahụ zara ya sị, “Aha m bụ Geburel. Ọ bụ nꞌihu Chineke, onye zitere m iwetara gị akụkọ ọma a ka m na-anọ ụbọchị nile. Geekwa ntị ka m gwa gị! Ebe ị jụrụ ikwenye nꞌihe m gwara gị, a ga-anapụ gị ike ikwu okwu. Ị gaghị ekwukwa okwu ọ bụla, tutuu ruo mgbe okwu a m gwara gị mezuru. Nꞌihi na okwu a m gwara gị ga-emezu mgbe oge ya ruru.” Mgbe ihe ndị a nile na-eme, ndị mmadụ ahụ gbakọrọ nꞌezi na-ekpe ekpere, nọkwa na-eche Zakaraya ka ọ pụta. O juru ha anya na ọ nọọla ọdụ nꞌime ime ụlọ nsọ ukwu ahụ.